Xasan Sheekh "Nin ku dilay har kuguma jiido" | Keydmedia
Xasan Sheekh “Nin ku dilay har kuguma jiido”
Axsaabta mucaaradka dalka ayaa ka cabsi qaba in dowladda haatan jirta ay samaysato muddo kororsi aan sharci ahayn, iyagoo ka digaya cawaaqibka ka dhalan doona.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kana tirsan hoggaanka Madasha Xisbiyada Qaran ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo shirka Dowlad Goboleedyada ee maanta ka furmaya magaaladda Dhuusamareeb.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in DF uu ku fashilantay howshii la doortay iyo mas'uliyadii lagu wareejiyay 2017, iyadoo Farmaajo uu ka dhabeyn waayay balanqaadkiisii ahaa inuu dalka gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah, xasilooni siyaasadeed iyo amni buuxa.
Waxaa kale uu sheegay in Dowladda iyo Maamul Goboleedyada in aysan heshiis ahayn, iyo sidoo kale labada Aqal ee Baarlamaanka oo gudoonkooda khilaaf laga dhexabuuray, isagoo taas ku tilmaamay nasiib-darro iyo in lagu lumiyay heykalkii dowladnimo.
"Dowladda Federaalka Soomaaliya hoggaankeeda maanta joogo wixi shalay markii ay hoggaanka qabanayeen lagu wareejiyay maanta in aaney heynin, Dowladda Federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah maanta islama shaqeeyaan, Labadii Aqal ee Baarlamaanka islama shaqeeyaan heygalkii dowladnimada sidaas ayuu ku lumay." ayuu yiri Xasan Sheekh.
Mar uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ayuu sheegay in muddo xileedka Dowladda uu gabaabsi yahay, Baarlamaankana u harsantahay wax ka yar 100 maalmood.
"Nin ku dilay har kuguma jiido, afar sano ayaa gabogabo sii ah, xilligii la doortay dowladaan baarlamaankeeda waxaa u haray wax ka yar 100 Cisho, ilaa hadana kama hadlin qaabka iyo shuruucda doorasho ee dalka. "
Ugu dambeyntii Xasan Sheekh ayaa Dowladda uga digay in la carqaladeeyo shirka madaxda maamulada dalka, oo maanta ka furmayo magaalada Dhuusamreeb ee caasimadda Galmudug.